रङ्गेली, भदौ ८ ।
रङ्गेली अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ । अस्पतालमा दैनिक एक सयभन्दा बढीको सङ्ख्यामा बिरामी उपचारका लागि पुग्न थालेका छन् ।
अस्पतालका चिकित्सक सुनिल चौधरीका अनुसार अस्पतालमा झाडापखाला, दम, ज्वरो, निमोनियालगायतका बिरामीको संख्या अहिले बढेको हो । अस्पतालले दाँत सम्बन्धी सेवासमेत शुरु गरेको छ । अस्पतालले गर्भवती सम्बन्धी सबै सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराएको चौधरीले बताए । गर्भवतीले नियमित जाँच तथा प्रसुती गराउँदा अस्पतालले ८ सय तथा १ हजार यातायात खर्च दिँदै आएको छ ।
अस्पतालले चौबीसै घण्टा ल्याब सेवा, डिजिटल एक्स–रे सेवाका साथै सर्पदंशको समेत उपचार गर्दै आएको छ । अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामीको पनि उपचार भइरहेको डा. चौधरीले जानकारी दिए । सर्पदंशका बिरामी दैनिक दुईदेखि तीन जनासम्म आउने गरेका छन् । अस्पतालमा अति सघन कक्ष सेवा प्राविधिक अभावका कारण सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । भेन्टिलेटरको सुविधा नहुँदा बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नु परिरहेको डा. चौधरीको भनाई छ ।